अदालतको फरार सूचीमा रहेकालाई कसले खोज्ने ?
अदालतको फरार सूचीमा रहेकालाई कसले खोज्ने ? रुपन्देही जिल्ला अदालतमा मात्र ३ हजार बढी व्यक्ति फरार
विकाश पराजुली बुटबल, १८ कात्तिक
विस. २०३४ देखि २०७६ भदौ मसान्तसम्म विभिन्न मुद्दामा दोषी ठहर भई सजाय पाएका ३ हजार ६ सय २१ जना रुपन्देही जिल्ला अदालतको फरार सूचीमा छन् ।
अदालतको फरार सूचीमा डाका चोरी, मानव बेचविखन, लागू औषध लगायतका मुद्दामा सजाय पाएका स्वदेशी ३ हजार ५ सय ५२ र ३७ विदेशी छन् । अदालतका अनुसार फैसला भइ सजाय पाएका १ हजार ९ सय ८४ मुद्धाका यति धेरै संख्यामा व्यक्ति फरार भएका हुन् ।
उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट कैद जरिवाना लागेका फरार व्यक्तिहरु रुपन्देही जिल्ला अदालतको रेकर्डमा ३ हजार ६ सय २१ पुगेको छ । ती फरार व्यक्तिहरुको कैद जरिवाना असुल उपरका लागि उनीहरुको विवरण स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा विभिन्न प्रहरी युनिटमा पठाइएको छ । तर पक्राउ शून्य जस्तै छ ।
अदालतको फरार सुचीमा रहेका व्यक्तिहरु सरकारी कार्यालयले प्रभाव हुने सेवा लिन आएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई असुल उपर गर्नका लागि अदालतमा पठाइदिने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । तर अदालतको आदेश अनुसार असुल उपर भएको पाईदैन ।
रुपन्देही जिल्ला अदालतका अनुसार अगन्य मात्रामा कतिपय व्यक्ति अदालतको सम्पर्कमा आएर सजाय भोगिसकेको तथा असुल उपर समेत भएको छ । अदालत तथा प्रहरी प्रशासन तदारुकताका साथ असुल उपर गर्न लागिपरेको बताइएको छ ।
‘हामीले सबैतिर जानाकारी पठाएका छौं, प्राप्त हुलियाअनुसार जानकारी गराएका छौं । विस्तारै व्यक्तिहरुले असुल उपर होलान,’ रुपन्देही जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार नेत्र प्रसाद भुसालले भने ।
जरिवाना र कैद तोकिएका फरार व्यक्तिहरुका सूची जिल्ला प्रहरी कार्यालय, इलाका प्रहरी कार्यालय र सबै स्थानीय तहमा पठाएको अदालतले बताएको छ ।
तर उनीहरुलाई उल्लेख्य रुपमा भेटाउन भने नसकिएको अदालत एवं नियमनकारी निकाय स्वीकार गर्छन् । फरार अभियुक्तले पटकपटक ठेगाना परिवर्तन गर्ने र ती व्यक्तिहरुले नाम र रुप परिवर्तन गर्ने तथा लुकेर बस्ने कारणले उनीहरुलाई पक्राउ गर्न समस्या भएको जिल्ला अदालत रुपन्देहीका तहसिलदार कृष्ण पौडेलले बताए ।
कानून व्यवसायीहरुका अनुसार फरार व्यक्तिहरुलाई अदालतले तोके बमोजिम दण्ड/जरिवाना असुल उपर गर्नका लागि छुट्टै कमिटि निर्माण गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् ।
अदालतमा रहेका विभिन्न फाँट र इकाइहरु आफ्नै काममा व्यस्त हुने भएकोले फरार व्यक्तिहरुको संख्यामा कमी आउन नसकेको जानकारहरुको तर्क छ । अदालत भित्र फैसला कार्यान्वयन गर्ने तहसिलदार भए पनि त्यो बाहेक छुट्टै कमिटि बनाए सम्भवत धेरै फरार व्यक्तिहरुको दण्ड÷असुल उपर हुने बताउँछन् ।
‘अदालतको नियमित कार्यमै भएका कर्मचारीहरु लाग्छन्, यसका लागि छुट्टै कमिटि गठन भएमा मात्र यो सम्भव देखिन्छ,’ अधिवक्ता धर्म खड्काले भने ।
रुपन्देही जिल्ला अदालतको तथ्यांकअनुसार २०३१–०४० सम्म २ वटा फैसला कार्यान्वयन गर्न बाँकी छन् ।
त्यस्तै, ०४१–०५० सम्म ९, ०५१–०६० सम्म ४ सय २३, ०६१–०७० सम्म १ हजार ३६, ०७१–०७४ सम्म ५ सय ८१ तथा ०७५–०७६ को भदौ मसान्त सम्म १ सय ३२ फैसला कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
यी सबै फैसलाका गरी ३ हजार ६ सय २१ व्यक्ति फरार सूचीमा छन् । भारतसँग सीमा जोडिएकाले रुपन्देहीमा अदालतबाट सजाय पाएका यस्ता व्यक्ति सजिलै भारतीय भूमिमा गएर बस्ने गरेका छन् ।
जुनसुकै ठाउँमा बसे पनि सजाय पाएको व्यक्ति माथि कारवाही हुने अदालतले जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक १८, २०७६, १२:२३:००
तिनाउ नदीमा अनियन्त्रित दोहन, फेरि ठूलो बाढी आउने जोखिम
कपिलवस्तुको राजापानीमा थारू संग्रहालय बन्दै
कोरोना कहरबीच यसरी खुवाइँदै भिटामिन र जुकाको औषधि [फोटो फिचर]
रूपन्देही सामूहिक हत्याकाण्डका अभियुक्त पुर्पक्षका लागि जेल चलान